एक्कासी ह्वात्तै बढ्यो यी देशका विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति ? – Butwal Sandesh
एक्कासी ह्वात्तै बढ्यो यी देशका विदेशी मुद्राको भाउ : हेर्नुहोस् कुन देशको कति ?
काठमाडौँ । मंगलबार युके पाउण्ड र कतारी रियालसहित केही देशको विनिमयदर बढेको छ । भने अमेरिकी डलरको भाउ घटेको छ । आज नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको विनिमयदर अनुसार एक अमेरिकी डलरको खरिददर १ सय २१ रुपैयाँ ३४ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर १ सय २१ रुपैयाँ ९४ पैसा तोकिएको छ । त्यस्तै एक बहराईन दिनारको खरिददर ३ सय २१ रुपैयाँ ७३ पैसा तोकिएको छ भने बिक्रिदर ३ सय २३ रुपैयाँ ३२ पैसा तोकिएको छ ।